chiremba - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'chiremba'
Manje ini ndoku....
Patient: Doctor ndine problem
Doctor: Zvakatanga rinhi?
Doctor: manje ini ndokumamisa
chiremba murwere doctor
Nhasi ndo kune final
Benzi: ''Chiremba ndiri kuita problem yekurota makudo achitamba bhora everyday."
Doctor: "Tora mapiritsi aya wonwa manheru pakurara."
Benzi: "Manje ndotoanwa mangwana nokuti nhasi manheru ndokune FINAL"
chiremba dofo bhora
Ndezve kubhawa zviya
Is this good??I visited ma doctor and he gave me some treatment and medicines .he also advised me to stop drinking beer. later in the evening I went to the bar and bought myself a fanta drink.while I was drinking I saw ma doctor drinking beer and he came to me and said""ko hauchamwa beer why?oo mari iyi piwa koti""and I said""doctor makanganwa here kuti ndini wamati chimbomira zvehwa
hwa”"and he said"""aaah iwe! ndezvekubasa zviya kuno kubhawa ngatnwei"kwakutenga beer kwakunwa..the next day I wasn't feeling well so I had to go back to ma doctor!"""doctor ndarwara!"" I said to him""""ko chiii futi“"" he asked"doro riya ramakati ndinwe nezuro"and he answdered""""aaah ungateedzera zvekubhawa iwe uchirwara?ndezvekubhawa zviya!unofa ukazviteedzera!""ndakaita weak!
chiremba doro bhawa chipatara
Sei usiri kudya?
Mapenzi akapiwa ndiro dzechikafu dzisina chinhu zvikanzi idyai vachida kuona kuti hapana rava nani, mapenzi aya ndokutanga kuita seari kudya. Chiremba vakafara vachiona rimwe risingadyi zvikanzi, wakamirirei usingadyi? zvikanzi nebenzi ndakamirira kuti zvipore
chiremba benzi mupengo chikafu
Surgery - mazita avana chiremba
Imagine the day before u have major surgery you are introduced to the team that will be performing it .
Unenge ucharamba surgery yacho
masasi ekupenga - chando kupisa
Ndirikuti ndikabata sipo netauro ndonzwa dzungu zvekutoda kudonha, kuzoti mvura, muviri wese urikubva watema. Saka chiremba vanditi ndimbomira kuzvishandisa. Ndichaenda hangu ku review kupera kwaJuly
chiremba chando mvura kugeza sipo tauro
cash shortage 2016
Mugabe @ 93
harare protests 2016